सरकारी बजेट ३० लाख खर्चेर महराकी पत्नीको नाममा पार्क बनाउनु पर्ने योगदान के हो ? - Kantipath.com
बलात्कारको आरोपमा अदालतबाट सफाई पाएका पूर्व सभामुख तथा दाङ क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णबहादुर महराकी पत्नी सीता महराको सम्झनामा रोल्पामा स्मृति पार्क निर्माण गरिएको छ । सीता महरा मेमोरियल फाउन्डेसनले रोल्पा नगरपालिका १ मेबाङमा स्मृति पार्क निर्माण गरेको हो ।
संघीय सरकारको ३० लाख र बाँकी जन श्रमदानबाट पार्क निर्माण गरिएको हो । दिवंगत सिता महराले रोपेर हुर्काएका आकर्षक फूल लालीगुराँस, चाइनिज टिमुर लगायतका बोटबिरुवाहरूलाई संरक्षण गरेर स्मृति पार्कलाई आकर्षक र मनोरम बनाइएको छ । स्थानीय राजनीतिक दलले भने बिना कुनै योग्दान महराको नाममा ३० लाख खर्चेर सरकारी बजेट दुरुपयोग भएको बताएका छन् । सरकारी बजेट ३० लाख खर्चेर महराकी पत्नीको नाममा पार्क बनाउनु पर्ने योगदान के हो ? भन्दै एमालेका स्थानीय नेता कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका छन् ।
तत्कालीन माओवादीले ०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धमा जाने घोषणा गरेपछि कृष्णबहादुर महरा भूमिगत भए। त्यसपछि परिवारलाई प्रहरी प्रशासनले सताउन थाल्यो। अनि महराको परिवारै जनयुद्धमा होमिएको थियो ।
महरापत्नी सीतालाई ०५४ साल साउन २९ गते राति नाबालक छोराछोरीसहित प्रहरीले थुनेर गिरफतार गर्न थालेपछि उनीहरु प्रहरी घेरा तोडर भाग्न सफल भएका थिए। सीता घर पछाडीको ढोकाबाट भाग्न सफल भएकी थिइन्। सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने साक्षर मात्रै भए पनि सीताले पूर्व सभामुख महरालाई पारिवारिक रुपमा निक्कै सहयोग गरेकी थिईन्।
रोल्पाको गजुलस्थित धौलेगाउँका बुवा मुक्तबहादुर थापा र आमा खिर्मादेवी थापाको कोखबाट ०१८ साल साउन १३ गते सीता महराको जन्म भएको थियो। सामान्य साक्षर सीताको कृष्णबहादुर महरासंग १७ वर्षको उमेरमा ०३५ सालमा विवाह भएको थियो । उनका २ छोरा २ छोरी छन्।
Previous Previous post: बझाङमा चार वर्षमा ५६ बर्थिङ सेन्टर निर्माण
Next Next post: जाजरकोटमा युवालाई बाँधेर निर्घात कुट्ने वडाध्यक्ष पक्राउ